Ukuhamba kakhulu umdla
Enye ingxaki kukuba i-ukutshintsha kwemozulu. Kwi-Italy kwihlobo, kukho amaqondo: kuba i-Russian akunakwenzeka ukuba kumelana ukuba ezi amaqondo obushushu, usekela kamongameli kwelinye icala. Indlela ingaba i-Italian abahlala Us ebusika. Akuvumelekanga ilula kakhulu. Ukuba aphelise iimpazamo, kufuneka nzulu kancinci ezimbalini nenkcubeko lizwe. Ukufunda incwadi elula izivakalisi, umzekelo: ‘molo, enkosi, mna andazi uphi Colosseum.
Musa kuba besoyika
Kusoloko kukho indlela ngaphandle.
Kwaye singafunda malunga inkcubeko, ulwimi, cuisine kwaye imicimbi yayo lizwe apho ufaka travelling, kwaye uyakwazi ndwendwela ezininzi amaziko olondolozo lwembali. Kukho, nangona kunjalo, ezinye iingxaki. A stranger ukuba ibuye, umzekelo, kwi-Italy, sele ezinye iingxaki. Ukwazi ulwimi obaluleke kakhulu. Kuyimfuneko ukuba yathetha kunye abantu amaziko olondolozo lwembali, kunye amapolisa, mhlawumbi kuba ezindleleni. Kangangoko kunokwenzeka, nangona kunjalo, buza apho ku-hamba, xa awuwazi isingesi, bugs izinto ezininzi abakhenkethi othetha kuphela isirussian, okanye kuphela isispanish, okanye kuphela isifrentshi, nokuthetha kunye abemi zabo umama ulwimi. Qinisekisa kusithiwa i-Italian, xa i-Russian ucela, Unbelievable, enye ingxaki kukuba i-ukutshintsha kwemozulu. Ngowe Italy destateci ingaba amaqondo: kuba i-Russian, akunakwenzeka ukuba kumelana ukuba ezi amaqondo obushushu, usekela kamongameli kwelinye icala. Indlela ingaba i-Italian abahlala Us ngexesha lasebusika. Akuvumelekanga ilula kakhulu, ukuba, uyazi aphelise iimpazamo, kufuneka nzulu kancinci ezimbalini nenkcubeko lizwe. Ukufunda incwadi elula izivakalisi, umzekelo: molo, enkosi, mna andazi uphi Colosseum.
M soloko indlela ngaphandle.
Uyakwazi ukufunda malunga inkcubeko, ulwimi, cuisine kwaye imicimbi yayo lizwe apho ufaka travelling, kwaye uyakwazi ndwendwela ezininzi amaziko olondolozo lwembali. Kukho, nangona kunjalo, ezinye iingxaki. A stranger ukuba ibuye, umzekelo, kwi-Italy, sele ezinye iingxaki. Ngokunxulumene nam, ukwazi ulwimi obaluleke kakhulu. Kuyimfuneko ukuba yathetha kunye abantu amaziko olondolozo lwembali, kunye amapolisa, mhlawumbi kuba ezindleleni. Kangangoko kunokwenzeka, nangona kunjalo, buza apho ku-hamba, xa awuwazi isingesi. Baninzi abakhenkethi othetha kuphela isirussian, okanye kuphela isispanish, okanye kuphela isifrentshi, nokuthetha kunye abemi zabo s ulwimi. Qinisekisa kusithiwa i-Italian, xa i-Russian ucela.
Enye ingxaki kukuba i-ukutshintsha kwemozulu. Kwi-Italy kwihlobo, kukho amaqondo: kuba i-Russian, akunakwenzeka ukuba kumelana ukuba ezi amaqondo obushushu, usekela kamongameli kwelinye icala. Indlela ingaba i-Italian abahlala Us ngexesha lasebusika. Akuvumelekanga ilula kakhulu. Ukuba aphelise iimpazamo, kufuneka nzulu kancinci ezimbalini nenkcubeko lizwe. Ukufunda incwadi elula izivakalisi, umzekelo: ‘molo, enkosi, mna andazi uphi Colosseum.
Kusoloko kukho indlela ngaphandle. Esihle kakhulu, Mna ubuqu iza kuphela ezi izivakalisi: a. yelizwe apho ufaka ndihamba, nazi umzekelo, i-alien abo arrives kwi-Italy ayikwazi unayo nayiphi na ingxaki, a. ukwazi ulwimi (kubalulekile preferable ukwazi ulwimi)
← Free Incoko Amagumbi Ngaphandle Ubhaliso - Incoko Kunye
Engaqhelekanga Iindawo Apho Kuhlangana Amadoda Ufuna a Budlelwane →